Antso ho an'ny mpikaroka an-dranomasina afrikanina - AfricaArXiv
navoakan'ny Sam Dupont on April 6 April 6
Mba hananganana ny fahafahan'ny andrimpanjakana afrikanina amin'ny fanaraha-maso sy ny fikarohana momba ny fanamorana ny ranomasina, dia mizara antso ho an'ny fandraisana anjaran'ny Tambajotra OA-Africa natokana ho an'ireo mpikaroka an-dranomasina afrikanina.
Africa Acidification Africa (OA-Africa) dia tambajotra pan-Afrika nantsoina manokana handrindrana sy hampiroborobo ranomaso (OA) fanentanana sy fikarohana any Afrika. Ny hetsiky ny fikarohana momba ny fanamorana ny ranomasina sy ny adin-tsaina mifandraika amin'izany amin'ny kaontinanta afrikanina dia mivoatra haingana ho valin'ny filàna mazava ny hetsika mba hampihenana sy hamahana ireo fiatraikany ateraky ny fanovana ny fiovan'ny toetr'andro sy ny rafitra. Ny OA-Africa dia misy mpahay siansa liana amin'ny fikarohana momba ny fanaraha-maso sy fanaraha-maso ny asidra any Afrika ary izy ireo dia ampahany amin'ny midadasika kokoa Tambajotra mandinika ny fanamasinana ranomasina eran-tany
OA-Africa dia mikendry ny:
1. antoka Afrika dia mahazaka sy mahalala ny mety ho fandrahonana sy paikady fanalefahana / fampifanarahana misy hiadiana amin'ny fanamafisana ny ranomasina.
2. mampivelatra tambajotran'ireo mpahay siansa miara-miasa amin'ny fanomezana (1) fampahalalana ho an'ireo tompon'andraikitra sy mpanao politika, (2) manome torolàlana sy torolàlana (3) mandrindra hetsika mifandraika amin'ny fikarohana sy fanaraha-maso OA (4) mamantatra ny fanohanana lehibe amin'ny fampitomboana ny fikarohana sy fanaraha-maso OA (5) hampiroborobo ny fandrosoan'ny siansa.
3. manamora fiaraha-miasa eo amin'ny mpahay siansa, ny mpiray antoka ary ny mpanao politika hananganana fahatakarana ny fiatraikany ara-tsosialy, biolojika ary ara-batana ary ny fiantraikan'ny fanamasinana ranomasina
Loharanon'ny sary: oa-africa.net/
Nandritra izay 7 taona lasa izay dia namolavola programa kinendry izahay hampitomboana ny fahafaha-manao ny fanaraha-maso ny asan'ny ranomasina ary ny fikarohana any amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana. Niofana 20 teo ho eo izahay, nahatratra siantifika 400 mahery ary nanome fitaovana ho an'ireo andrimpanjakana maro.
Fanombanana ny fahaizan'ny Acidification Ocean
Ny manam-pahaizana momba ny asiteran'ny ranomasina dia namorona fanontaniana hamantarana ny filàna sy ny famolavolana ny ezaka amin'ny fananganana fahaiza-manao amin'ny ho avy (fitaovana, fiofanana). Ity fampahalalana ity dia hahasoa ny vondrom-pikarohana Afrikana ary hitarika ny hetsika ho avy. Hatsangana ary zaraina amin'ny vondrom-piarahamonina ny tahiry tsy fantatra anarana. Hisy famintinana hatao ao anaty taratasy fotsy OA-Africa mikendry ireo mpanao politika hisarika ireo loharanom-pikarohana momba ny asan'ny ranomasina aty Afrika.
Raha te handray anjara dia tokony ho mpiasa ao amin'ny andrimpanjakana afrikanina miasa amin'ny siansa an-dranomasina ianao. Tsy mila miasa amina tetikasa fampidirana asidra anaty ranomasina ianao izao. Ity fanombanana ity dia fanomezana fanohanana kendrena amin'ireo andrim-panjakana ary hanatsara ny vintana hanombohana ny fanaraha-maso sy ny fikarohana momba ny fanamorana ny ranomasina atsy ho atsy.
Azafady fenoy ity fanontaniam-panontaniana manaraka ity; tokony maharitra 15-20 minitra fotsiny izany:
Mandehana any amin'ny questionnaire
Mba hahafahanay manombana ny fahaizan'ny fikarohana asidra ranomasina manerana ny kaontinanta, azafady zarao amin'ny mpiara-miasa aminao ny fanontaniana.
Raha efa nahavaly ny valin'ny fanontanina taloha ianao dia valio indray mba hitateranao ny fandrosoana rehefa mandeha ny fotoana.
Fiorenana fananganana fahaiza-manao ho an'ny Ivontoerana fandrindrana iraisam-pirenena momba ny ranomasina (OA-ICC)
Mpampianatra zokiny sy mpampianatra mpiara-miasa aminy, University of Gothenburg, Suède
Tags: fiovan'ny toe-trandroFikarohana an-dranomasinaOcean Acidificationmpanao gazety